Maraykanka oo ka walaacsan Xaaladaha Amniga Shaqaalaha Gargaarka samafalka ee jooga Soomaaliya.
Mareykanka wuxuu aad uga walaacsan yahay xaaladaha sii xumaanaya ee amniga ee shaqaalaha gargaarka samafalka ee jooga Soomaaliya. Waxaan si xoogan u cambaareyneynaa weerarada lagu qaadayo kuwa ka shaqeynaya ilaalinta nolosha kuwa nugul.
Rabshadaha noocaas ah waa inay joogsadaan kuwa mas’uulka ka ah falalkaas oo kale waa in sharciga la horkeenaa.
Bishii Meey 27, toddobo shaqaalaha caafimaadka bani’aadamnimada ah iyo xubin bulshada ka mid ah ayaa lagu diley weerar lagu qaadey xarun caafimaad oo ay ku umusho Hay’adda Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka ee degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.
Safaaradda Mareykanka iyo Howlgalka USAID ee Soomaaliya waxay tacsi u dirayaan qoysaskii iyo asxaabtii dadkii lagu dilay weerarkaan.
Dhacdadan ayaa ah tii ugu badneyd ee ku dhinta ficil gacan ka hadal ah oo lala beegsaday hay’ad aan dawli ahayn oo keliya sanadkaan, taas oo tirada guud ee shaqaalaha NGO-ga ku dhimatay Soomaaliya ilaa iyo sanadka 2020-ka. dhibaatada socota.
Falalka noocan ah ee rabshadaha ah ee lagula kacayo kuwa ka shaqeeya arrimaha bina-aadamnimada ayaa ah muuqaal gaar ah oo si weyn u muujinaya diidmada guud ee helitaanka gargaarka aadanaha iyo kaalmaynta dadka nugul.
Waxay ku xadgudbayaan ilaalinta dadka rayidka ah, oo ay kujiraan shaqaalaha gargaarka, oo lagu aasaasay qaanuunka bini’aadanimo ee caalamiga ah.
Dhacdadan waxay ka dhigan tahay qaab xoog leh oo rabshado wata oo lagula kaco shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada.
Dowladda Mareykanka waxay ugu yeereysaa dhammaan qeybaha kala duwan ee Soomaaliya inay dhowraan sharciga caalamiga ee bini’aadannimada iyo in la ilaaliyo shaqaalaha gargaarka si ay u sii wadaan caawinta dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan ee ay la shaqeynayaan.